Vous êtes ici : Accueil GAZETIN'NY NOSY Ampanjaka: Aza atao fitaovana pôlitika
Hatramin’ny alarobia faha 04 janoary 2017 teo dia maro ny fanakianana azonay avy amin’ny olona maro mpandala ny fanjakana nentim-paharazana sy ny fomba Malagasy manerana ny nosy fa indrindra ireo mponina avy any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana iny. Omaly alatsinainy faha 09 janoary 2017 dia zanak’i Mananjary vitsivitsy avy any amin’ity distrika ity no tafaresaka taminay ka nilaza fa tsy nanatrika iny fihaonana tany Farafangana izay nolazaina fa fihaonan’ny Ampanjaka avy amin’ny “Grand Sud-Est” iny ny avy any Vatovavy Fitovinany manontolo. Nanambara ireto zanak’i Mananjary ireto fa tsy tokony atao fitaovana pôlitika ny rafitra fiaraha-monina sy ny fitondrana nentim-paharazana any amin’izy ireo. Fanapotehana ny kolotsaina sy ny fomba Malagasy tanteraka no ataon’ny fanjakana amin’izao fotoana izao, hoy izy ireo. Voalazan’ireto zanak’i Manajary ireto fa manana rafitra ny Ampanjaka amin’ny fanapahany hevitra amin’ny fitondrany ny vahoaka ao amin’ny toerana izay iadidiany fa tsy toa ireny tany Farafangana ireny velively. Fanamaivanana ny rafitra nentim-pahazarana iny nataon’ny fanjakana iny ka tsy ekena, hoy ihany izy ireo. Tsy afaka hijery fotsiny ny zavatra toa ireny izahay ka tsy maintsy ampahafantarina koa ny hevitray.
Ny faha 06 janoary 2016 indray dia ampanjaka avy any Farafangana no nifandray tamin’ny zanak’ity faritra ity ka nilaza tamin’ity olona ity fa tsy nisy fifanarahana fa hanohana ny filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny filatsahany amin’ny taona 2018 izany ireo Ampanjaka tonga tany Farafangana izay nivory tamin’iny fotoana iny. Tsy ny Ampanjaka no namoaka iny hevitra iny, ka mangataka mpanao gazety avy aty Antananarivo io ampanjaka io ho tonga any Farafangana hilazany ny zava-misy rehetra sy ny ambadika pôlitika tamin’iny fihaonana iny. Tezitra noho izany koa ireto olona nifandray tamin’ny ampanjakany ireto raha naheno izany.
Nametraka fanakianana mafy amin’ny fihetsika nataon’ny fanjakana amin’ny famoriana ampanjaka tany Farafangana tamin’ny faha 05 janoary 2017 lasa teo iny ny zanaka ampielezana avy any Vohipeno, izay mipetraka any Fianarantsoa. Fanosihosena ny hasin’ny fanjakana nentim-paharazana sy fanimbazimbana ny fomba Malagasy no fandraisany iny raharaha nataon’ny fanjakana iny. Nahoana no ampanaovina fanambarana ny ampanjaka, hoy ihany ireo olona mifandray amin’ny tambazotra ireo, nefa tsy mifanaraka amin’ny fomba akory izany? Raha ireo fanambarana sy ny resaka avoakan’ny olona izay mahatsiaro tena voatohintohina ireo ny fomba any amin’izy ireo dia tsy faly amin’ny fanambarana tany Farafangana iny. Voalazan’izy ireo fa ataon’ ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina fitaovana pôlitika ny ampanjaka ka tsy mety izany. “Aoka”, hoy izy ireo, “ny tsy fahombiazan’ny fanjakana tsy hafindra any amin’ny ampanjaka toa izao”. Ny filazana fa mangataka ny filatsahan’ingahy Hery Rjaonarimampianina amin’ny taona 2018 ho filoham-pirenena indray dia midika fa manaiky izao fitondrana tsy mahomby izao ary manohana sahady ny fanohizana izany. Tsy miara-miombon’antoka amin’ny tsy fahombiazan’ny fanjakana amin’izao fotoana izao ireo ampanjaka ireo, hoy ihany ireto olona milaza ny heviny eo anatrehan’ny zavatra tany Farafangana iny, ka tsy tokony ho hatao intsony ny fomba toa ireny.